Southern African Leaders Express Impatience With Harare Unity Government Talks
More regional leaders are expected to take up the Zimbabwe issue next week around the inauguration of Mozambican President Armando Guebuza, now head of the SADC troika on politics, defense and security
Leaders of the Southern African Development Community have joined South Africa in expressing concern at the slow pace of discussions in Harare aimed at resolving so-called outstanding issues regarding the power-sharing government there,warning that delays could lead to more serious problems.
SADC ministers meeting in Maputo on Thursday said they will urge the Harare unity government to expedite talks on resolving the outstanding issues.
More regional leaders are expected to take up the Zimbabwe issue next week around the inauguration of Mozambican President Armando Guebuza, now head of the SADC troika on politics, defense and security.
South African officials briefed SADC troika members on the negotiations in Harare where a main issue is the demand by the Movement for Democratic Change formation of Prime Minister Morgan Tsvangirai that the central bank governor governor and the attorney general be replaced. Both were unilaterally named in late 2008 by President Robert Mugabe, the MDC charges.
Tsvangirai MDC power-sharing negotiator Elton Mangoma, also the minister of economic planning, told VOA Studio 7 reporter Blessing Zulu that his fellow negotiators know SADC is impatient but they need time.